Real Madrid Waad Heli Kartaan Christian Eriksen Haddii Aad Marka Hore ......... Tottenham Oo Halkan shuruud Madrid Ku Xidhay. - Gool24.Net
Real Madrid Waad Heli Kartaan Christian Eriksen Haddii Aad Marka Hore ……… Tottenham Oo Halkan shuruud Madrid Ku Xidhay.
Madax waynaha kooxda Real Madrid ee Florentino Perez ayaa si wayn u doonaya saxiixa xidiga khadka dhexe ee xulka qaranka Denmark iyo kooxda Tottenham ee Christian Eriksen inkasta oo ay isku khilaafsan yihiin Zinedine Zidane.
Inkasta oo aanu Zidane doonayn saxiixa Christian Eriksen oo uu ka door bidayo Pual Pogba, haddana Real Madrid ayaan wali ka quusan in ay la soo saxiixan karto Eiksen oo uu Perez u arko xidig qiimo ahaan aad uga hoosayn kara Pogba.
Christian Eriksen ayaa galaya 12 kii bilood ee heshiiskiisa Spurs ugu danbeeyay taas oo sabab ay u arkaan in ay maamulka Tottenham ku qasbi karto in ay dhegaystaan dalab aad uga hooseeya inta lagu qiimaynayo xidigan.
Laakiin wargayska Daily Mirror ayaa shaaciyay in hal shuruud oo kaliya ay hadda Tottenham ku xidhay Real madrid si ay ula saxiixan karaan bartilmaameedkooda Christian Eriksen.
Sida warkan lagu sheegay, kooxda Tottenham ayaa Real Madrid u ogolaan doonta saxiixa Christian Eriksen balse waa haddii ay marka hore Madrid ogolaato in Marco Asensio uu isna ku soo biirayo Spurs.
Maamulka Tottenham ayaa Real Madrid ka doonaya saxiixa Marco Asensio si ay u fasixi karaan xidiga khadka dhexe ee Christian Eriksen.
Zidane oo ahaa tababarihii fursada ugu wayn siiyay Marco Asensio ayaan la ogayn in uu xidiga reer Spain u ogolaan karo in uu qayb ka noqdo heshiiska Christian Eriksen.
Laakiin Tottenham ayuu qorshahani u yahay mid laba faa’iido u keeni kara kuwaas oo kala ah in marka hore ay Madrid cadaadis ku saarto in ay Christian Eriksen iskaga hadhaan ama in ay badalkiisa Marco Asensio keenaan.
Si kastaba ha ahaatee, iyada oo Juventus si wayn sare ugu qaaday qorshaha ay ku doonayso in ay dib u soo ceshato Pual Pogba ayuu Christian Eriksen noqon karaa xidiga ay Madrid khadka dhexe ee kooxdeeda ku soo xoojin karto.